Xildhibaano gaaraya 100 oo dhaqaaq siyaasadeed iyo Mooshin ka dhan ah Xukuumadda ka bilaabay Kenya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xildhibaano gaaraya 100 oo dhaqaaq siyaasadeed iyo Mooshin ka dhan ah Xukuumadda...
Xildhibaano gaaraya 100 oo dhaqaaq siyaasadeed iyo Mooshin ka dhan ah Xukuumadda ka bilaabay Kenya
Doorashadii madaxweyne Farmaajo ku dhwaad 100 ildhibn ayaa u codeeyayay Madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Xasan Sheekh oo tartan adag la galay Madaxweyne Farmaajo .
Iyadoo ay taasi jirto hadana waxaa la sheegaya inuu madaxweynaha uu balan ka bax uu ku sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanadii codkooda siiyay xiligii tartanka doorshada .
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban labo gale ayaa hadda ku maqan fasax labo bilood ah , waxaana taasi ay keentay in qaar ka mid ah si xasarad siyaasadeed ay u abuuraan inay aadeen dalka Kenya.
Xildhibaanadaan iyo Sentaradaan labada ee Baarlamaanka ka tirsan ayaa meesha kaliya ee dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ka bilaabo karaan waxay u noqday magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya.
Previous articleAhlu Sunna oo Maanta xilkii ka qaaday Taliyihii guud ee Ciidamada ururkaas iyo Khilaaf ka dhashay
Next articleGalmudug oo Puntland ku wareejiysay Gaari laga soo dhacay Wasiir ku xigeen ka tirsan Puntland